Paco Alcacer Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Paco Alcacer Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubadda cagta oo sida ugu fiican loo yaqaan magaca "Paco". Dabeecadeena Paco Alcacer iyo akhbaaraha aan la xariirin Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, taariikhda qoyska, sheekada nolosha ka hor caan ka ah, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka iyo nolosha qofka.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu yahay udubdhexaadiye isku kalsoon oo ujeedooyin ah. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mid ah ayaa ka fikira Paco Alcacers 'Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Paco Alcacer Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Hore iyo Qoyska
Bilaabidda, magaca buuxa waa Francisco Paco Alcácer García. Paco Alcacer wuxuu ku dhashay maalintii 30th ee August 1993 hooyadiis, Inma García iyo aabbaha, Paco Alcácer ee Torrent, bulsho Valencia, Spain. Hoos waxaa ku yaal sawirka waalidkiis oo jecel inay ku raaxaystaan ​​miraha foosha (guushooda wiilkooda).
Paco ma aysan korin waalidkiis keligiis oo ka tirsan qoyskiisa Alcacer. Wuxuu ku koray walaalihiis, walaalkiis Jorge Alcácer García iyo walaasha Marta Alcacer.
Marta oo ka duwan Jorge (da'da ugu yar ee qoyska Alcacer) waxay ku jirtaa hab nololeed gaar ah sida lagu arkay iyada Instagram xisaabta.
Paco Alcacer Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Dhismaha Xirfadaha
Beerashada ama kubadda cagta: Paco waxay u dhalatay sidii xishood iyo xayiraad degan qoys qoys oo beeralay ah oo ku shaqeeya asal qowmiyadeed. Koritaanka, wuxuu aad ugu dhawaa aabihii oo waligiis doonayay inuu wiilkiisa u kiciyo sida beeraleed.
Nasiib darro, Paco Alcacer marnaba kuma tiirsanaan beerashada, mana dooneynin nolol qibrad gaboobay. Cayaartu waxay ahayd habka ugu fiican ee looga baxsan karo waalidkiisa beeraha.
Paco Alcacer Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Nolosha Mudnaanta Hore
Paco ayaa sii waday inay muujiso xiisaha kubada cagta sida cunug. Taasi waxay waalidiinteeda ka dhigtay in ay wiilkeeda ku qoraan liiska Monte-Sión, oo ah koox kubadda cagta ah Torrent, Spain.
Alcacer wuxuu ku soo kordhay halyeeyada reer Brazil iyo Spain, Ronaldo Luis Nazario de Lima iyo Raul Gonzalez.
Horraantii, Paco Alcacer wuxuu sameeyay qaab ciyaareed cajiib ah oo Raul uu uga mahadceliyay isaga oo awood u leh inuu booska saxda ah helo waqtiga saxda ah. Ciyaaryahankii hore ee da'da yaraa, Paco ayaa qirtay in xooggiisa uu dhameystiray islamarkaana uusan dhicin. Mar uu ka hadley wareysiga in mar kasta oo uu ku dhaqmo kubada kubadda ayuu ku dhameeyaa inuu dhaco. In uu erayada ...
"Waan ogahay waxa aan ku qanacsanahay, waxaana isku dayaa inaan sameeyo inta badan. Waan ogahay qaabka aan u leeyahay. Waxaan u baahanahay inaan ku jiro sanduuqa, taasina waa meesha aan ka shaqeeyo. "
Si kastaba ha noqotee, isku-darka xeeladaha goolasha ee Raul iyo Ronaldo, Paco ayaa heshay tayada loogu talagalay goolal dhalinta oo muujineysay calaamadaha hore ee uu halis ugu jiri lahaa. Inkastoo ay qaadatay ciyaartoy dhowr ah si ay u nadiifiyaan dhamaystirkooda, tani ma ahan sida Alcacer oo sannadihii u dambeeyay ku qarash gareeyay shabakadaha Spain iyo Europe.
Ma ogeyd?… Paco ayaa ku dhuftay 14 xilli ciyaareedkii 2009 / 10 European Under-17 Championship oo ay ku jirto isreebreebka. Diiwaankaan wuxuu weli u taagan yahay waqtiga qorista.
Paco Alcacer Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Dhibaatada Qoyska Alcacer
Maalinta 12th ee Agoosto 2011 ayaa waligeed ku noqon doonta maalinta ugu sarreysa ee nolosha Paco Alcacer. Maalintaasi waxay bilowday inay noqoto maalin farxad leh iyadoo goolka uu dhaliyay goolka seddexaad iyo kan ugu danbeeyay uu ka dhaliyey guushii 3-0 ay kaga badiyeen Roma. Nasiib darro, markii uu ka baxay garoonka Mestalla halkaas oo uu la socdo waalidkiis, masiibo ayaa ku dhacday.
Alcacer aabihiis oo la socday iyadoo wiilkiisa iyo xaaskiisa ay si lama filaan ah u burburiyeen wadada ka dib markii ay wadne xanuun ku qaadatay. Inkasta oo ay jiraan dadaallooyin ay 30 ku qaadeen dadaal caafimaad oo ay ku soo celinayaan, 44-jir ayaa geeriyooday. Daacadnimo, masiibadani waxay dhacday wakhtigii Paco's 18 ee soo socotay. Nasiib darro, waxa ay aheyd ka dib markii ciyaartii ugu horeysay ee uu ku soo barbaariyo da 'yarta kooxda kubada cagta ee heerka koowaad ee Valencia.
Laga soo bilaabo maalintaas, mar kasta oo Valencia ay guriga ku ciyaaraan, saboolka Alcacer waa la xusuusin doonaa maalinta ugu sarreysa noloshiisa. Paco mar kale qirtay in musiibadiisii ​​qoyskiisa ay ku qasbeen inuu si degdeg ah u koro. In uu erayadiisa;
"Waxaa i dhibsaday meel aan ka fogeyn markii aan joogay 18. Anigu xitaa kuma aan aamusin aabahay, way adagtahay. Waxay ahayd masiibo qoys oo igu qasabtay inaan si dhakhso ah u koro "
Dhimashada aabihiis wuxuu awood u siiyey in uu sii wado dagaalka oo uu isku dayo wax kale. Tani maanta waxa ay ka dhigtay nasiib-xumo is-qadarin ah oo goolal u dhaliyey 6 daqiiqado 81 (diiwaanka Bundesliga) oo kor u qaaday gacmihiisa si uu aabihiisa u koro.
Paco Alcacer Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Nolosha Xiriirka
Sida hadalku u socdo, ka dib nin kasta oo weyn, waxaa jira haween. Xaaladdan oo kale, ka dambeysa ku dhawaad ​​ciyaaryahan kasta oo guuleysta kubadda cagta Isbaanish, waxaa marwalba ah haweeney qurux badan, wag ama saaxiibbo. Xaqiiqdii, Paco Alcacer ayaa awood u leh, iyo sidoo kale qaab ciyaareedkiisa noloshiisa garoonka dhexdiisa ayaa kaa caawin doona inaad dhisto sawir buuxa.
Wakhtiga qorista, Paco Alcacer wuxuu xiriir la leeyahay Beatriz Lopez, oo ah hooyo reer Valencia ah oo ku dhashay 23rd August, 1993.
Paco iyo Beatriz labaduba waxay shukaansanayeen tan iyo bishii Diseembar 2010. Beatriz waa wag caan ah oo ku faanto in kabadan 45K taageerayaasheeda barta Instagram-ka, oo intooda badan taageerayaal u ah ninkeeda oo leh in kabadan 1.5 milyan. Instagram raacsan.
Quruxda Beatriz waxay ku fiican tahay Isbaanish, Catalan / Valencian iyo Ingiriisi. Ka gaabinta bogagga warbaahinta bulshada, labada jacayl, ixtiraamaan oo is fahmaan.
Paco Alcacer iyo Beatriz Lopez sida wakhtiga qoraagu waa hooyo iyo aabe gabadh ubadkooda oo magacooda lagu magacaabo Martina (sawir hoose oo ay la socdaan waalidkeeda quruxda badan).
Isagoo ka eegaya muuqaalkeeda quruxda badan ee ka muuqata sawirka hoose, Martha waa hubaal shakhsiyadeed oo saaxiibtinimo leh. Waalidkeedu waa farxad weyn oo farxad leh.
Paco Alcacer Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Naftaada Shaqsiga
Paco waxay la jirtay Beatriz wax ka badan sanado 8. Tani waxay muujinaysaa inuu yahay midka ugu kalsoon. Ka dib markii uu jecel yahay lammaanihiisa, gabadhiisa, waalidka iyo walaalaha, taas oo eeyga sanduuqiisa ee uu ugu yeeray Kyara raacaya xiga.
Paco marnaba ma iloobin inuu qirto aabihiis daaha ka qaaday mar kasta oo uu goolal dhaliyo.
Habka Paco ee habka nolosha ayaa xaqiijineysa inaan waxba laga heynin fursad aysan ku tartameynin Barcelona.
Ma ogeyd?… Sababta ugu weyn ee ay Barca u qaadatay waqti dheer si ay u soo qaadato weeraryahan waxay aheyd in bartilmaameedkooda aysan dooneynin inay waqti u tartamaan Messi, Suarez iyo Neymar oo loo yaqaan 'MSN Force'.
Hase yeeshe, Paco Alcacer ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed ku qaatay FC Barcelona isagoo ku dagaalamaya meelkasta oo ay joogaan MSN. Si kastaba ha ahaatee, ma uusan sameynin ciyaartoy kale oo isku dheelitiran sida loo arko ka dib Neymar bixi Paco oo wali la diiday inuu boos ka helo line-upka Dortmund.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada nooca Paco Alcacer ee ku saabsan sheekooyinka sawirka. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Ronald Koeman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Quique Setien Taariikhda Carruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Andre Schurrle Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Taariikhda wax laga beddelay: Janaayo 27, 2020
Marc-Andre ter Stegen Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer